Japan Dream idol Project from Myanmar! Japanese-affiliated training project has started. | Japan Dream Idol Project (J-DiP)
November 15, 2021	 December 8, 2021
Kyodo News (Nov, 2021)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Japan Dream idol Project အတွက် ဂျပန်နှင့် ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ရေး ပရောဂျက်ကို စတင်ပါပြီ။
ယခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ စွန့်ဦးတီထွင်သူများသည် “Japan Dream Idol Project” ဟုခေါ်သည့်အမျိုးသမီး Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဖန်တီးရန် ပရောဂျက်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
မိမိအနာဂတ်အတွက် အိုင်ဒီယာများ စိတ်ကူး ပုံဖော်လိုသည့် မိန်းကလေး အများအပြား လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီး ပထမဆုံး လူရွေးပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလရဲ့ ဒုတိယမြောက် ရက်သတ္တပတ်တွင် SNS တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ ရွေးချယ်ပုံ နှင့် လေ့ကျင့်မှုကို ပြသသည့် ဗီဒီယိုကို ထုတ်လွှင့်သွားပါမည်။
“Japan Dream Idol Project” ပထမအဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော ပြိုင်ပွဲဝင် ၂၂ ဦး (ZERO2ONE မှပံ့ပိုးကူညီသည်)
အဆိုပါ ပရောဂျက်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အီလက်ထရွန်နစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး (EC) လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ZERO2ONE ၏ ကိုယ်စားလှယ် Daiki Kato မှ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Meow Meow သည် ဒေသတွင်း အကသင်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက် စီးပွားဖြစ် (CM) ကကွက်များစွာကို ကိုင်တွယ်ပေးသည့် ထိုင်းအကသမား တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ Meow Meow သည် ဆိုးလ်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် စတူဒီယို “1 Million Dance studio” တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ Moya Fanai နှင့် အခြားအကဲဖြတ်ဒိုင်များအပြင် Japan idols များကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ဂျပန်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်လုပ်သူများကလည်း အဝေးမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ပရောဂျက်အတွက် တရားဝင် facebook စာမျက်နှာကို ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပရောဂျက်ကို မိတ်ဆက်ကာ လျှောက်ထားသူများကို ရွေးချယ်စိစစ်ခဲ့သည်။
“မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအောက်မှာ တုံ့ပြန်မှု ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်မိပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုက မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပါတယ်” ဟု မစ္စတာ Daiki Kato က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတွင် Follower 16,000 ကျော်ရှိပြီး နောက်ဆုံးနေ့တွင် လူ 980 ခန့်သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် သီချင်းများဖျော်ဖြေသည့် ဗီဒီယိုများတင်သွင်းခြင်းအတွက် ပထမအဆင့်ကို ရွေးချယ်ခံရန် လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
လျှောက်ထားမှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ ရန်ကုန်မှဖြစ်ပြီး ကျန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ နေပြည်တော်၊ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည့် မန္တလေး၊ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းတို့မှ ဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်မှ ရွေးချယ်ခံရသူ 22 ဦးသည် ဒုတိယအဆင့် ရွေးချယ်ရေးသို့ သွားရောက်ပြီး စိစစ်မှုအပိုင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ် အကဲဖြတ်ခြင်း အခြေအနေကို ရန်ကုန် မြို့ စတူဒီယိုတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ Rohto Pharmaceutical ကလည်း ဤ ပရောဂျက်ကို ပံ့ပိုးပေးထားသူတစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်သည်။
စိစစ်မှုရလဒ်အရ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်ကြားရှိ လူ ၂၂ ဦးသည် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပသည့် စိစစ်‌ရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များကလည်း လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်က သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော ဂျပန်သီချင်း၊ အကနှင့် မိမိကိုယ်ကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသော anime “Kimetsu no Yaiba” မှ ဂျပန်အထက်တန်းကျောင်းဝတ်စုံများနှင့် ဇာတ်ကောင်များကို အမှတ်ရစေသည့် ဝတ်စုံအဖြစ် ပြိုင်ပွဲဝင်သူအချို့သည် cosplay လုပ်ကြသည်။
Ukulele ကစားခြင်း၊ Ventriloquism နှင့် ကရာတေးစသည့် အထူးကျွမ်းကျင်မှုများကို ပြသခြင်းအပြင် အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားဘာသာစကားများကိုအသုံးပြု၍ ကျွမ်းကျင်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
အကဲဖြတ်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေအားလုံးဟာ ဖျော်ဖြေရေးလောကအတွက် သူတို့ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ သဘောကျမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို တူညီကြပါတယ်။ “ငါရှုံးရင်တောင် ငါမအောင်မချင်း အကဲဖြတ်ခံရမှာပဲ၊ ငါအရှုံးမပေးဘူး။”
“အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာ အလေးထားတဲ့ လက်ရှိ ဖျော်ဖြေရေးလောကကို ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်”
“အလှတရားဆိုတာ ဘယ်အရာမှ မယှဉ်နိုင်တဲ့ ခွန်အားတစ်ခုပါ။” အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က သော်တာဝင်းသူ (၁၆ နှစ်) ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က ဂျပန် ကာတွန်းကားကို ဝါသနာပါပြီး ဂျပန်စာ စာမေးပွဲ တတိယတန်း (N3) မှာ ဂျပန်စာကို စတင် သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်လိုသုံးတဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။) ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်ပုံတွင် သူမသည် ကော်ဖီဆိုင် စားပွဲထိုး ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်၍ပြသထားသည်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ idol တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အင်တာဗျူးကို ဖြေကြားခဲ့သူ သော်တာဝင်းသူ (အနုပညာနာမည် ဟာရုဟာနာ ချူး)။ “ကျွန်မရဲ့ ပွဲဦးထွက်ပွဲလုပ်ချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ ကခုန်မှုနဲ့ သီချင်းဆိုနိုင်စွမ်းကို လူတော်တော်များများ မြင်စေချင်ပါတယ်” (ZERO2ONE မှ ပံ့ပိုးပေးသည်)
အကဲဖြတ်ခံတဲ့ ထိုင်းအကသမား Meow Meow က “လျှောက်ထားသူတွေ မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြင်ဆင်ရတာကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ Idol တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားချင်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုသို့ ကူးပြောင်းပြီးနောက် စမတ်ဖုန်းများ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ပဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် လျှင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ တီဗီနှင့် ကြော်ငြာများကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာနယ်ပယ်တွင် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအဖွဲ့ “BLACKPINK”၊ ဂျပန် “AKB48” နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်တူအဖွဲ့များသည် လူသိများလာပြီး လက်လှမ်းမီနိုင်သော Idol များဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဖျော်ဖြေရေးသမားများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့် ထုတ်လုပ်မှုသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သော်လည်း ကိုရီးယားကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်း၌ လူသစ်ရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းကို နှစ်အတော်ကြာအောင် အသက်သွင်းလျက်ရှိသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားဖျော်ဖြေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသားများ ပါဝင်သော Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မွေးဖွားခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မရှိပါ။
ဤပရောဂျက်တွင် ပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် အနုပညာကို စိတ်ဝင်စားသည့် လူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက် ဒေသတွင်းအခြေစိုက်စခန်းများကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ “လူငယ်တော်တော်များများဟာ အနာဂတ်မှာ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသလို ခံစားမိကြပေမယ့် ဒီပရောဂျက်က သူတို့ကို အလင်းရောင်နဲ့ အနာဂတ်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်” လို့ Meow Meow က ဆိုပါတယ်။ မစ္စတာ Daiki Kato ကလည်း “အိပ်မက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာကြားက တံတားတစ်စင်းဖြစ်မယ့် idol တစ်ယောက် မွေးဖွားလာစေဖို့ ဒီပရောဂျက်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယအဆင့်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူ (၁၃)ဦးကို အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ Meow Meow နှင့် Moya Fanai တို့က လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ကုန်တွင် ပြန်လည်စိစစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင် Facebook နှင့် YouTube တွင် စစ်ဆေးမှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုအခြေအနေများကို ဖော်ပြရန်အတွက် နိုဝင်ဘာလလယ်မှ တစ်ပတ်လျှင် 10 မိနစ်ကြာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အစတွင်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့် ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အချိန်၌ ၎င်းကိုပိုမိုလူသိများလာစေရန်နှင့် ကြော်ငြာများတွင်ပါဝင်သည့်နေရာများကဲ့သို့သော တက်ကြွစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နေရာအရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ပေးလိုပါသည်။
အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခဲ့သော လေ့ကျင့်မှုအခြေအနေ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တို့ရဲ့ အပြုံးများ = အောက်တိုဘာ ၉ ရက်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ (ဓာတ်ပုံ – NNA)
This year, Japanese entrepreneurs in Myanmar launchedaproject called “Japan Dream Idol Project” to createafemale idol group.
A lot of girls dreaming of future idols applied, and the first premiere took place on September 26th in Rangoon. 2nd week of November,avideo showing the test and training will be released on SNS. Announcement of “Japan Dream Idol Project” 22 successful candidates (Supported by ZERO2ONE)
The project was implemented by Daiki Kato,arepresentative of ZERO2ONE, which operates the Electronic Commerce (EC) business in Yangon. Meow Meow,aThai dancer who runsalocal dance school and also handles many commercial (CM) choreography for major companies, is also in the famous studio “1 Million Dance studio” in Seoul, raised in South Korea. In addition to the participation of the Moya Fanai from Myanmar and others who belonged to the group as judges, Japanese entertainment producers who have experience in training Japanese idols will also cooperate remotely.
In the project, the official facebook page was launched in early July to introduce the project and solicit applicants for screening.
“I was worried about how much reaction I would get under the unstable situation, but my interest was more than I expected,” said Mr. Kato.
It has more than 16,000 followers, and by the deadline, about 980 people had applied for the document screening process for submitting videos that introduce themselves and perform songs.
About 80% of the applications are from Yangon, and the remaining 20% ​​are in the capital Naypyidaw, the second city of Mandalay, as well as the northern Kachin State and the southern Tanintharyi Region.
The state of the first judging committee held atastudio in Yangon city.
A local subsidiary of Rohto Pharmaceutical, which supported the project, sponsors and supports the examination committee = September 26, Yangon, Myanmar (photographed by NNA)
22 candidates went to the second screening and performed some activities for the self-promotion screening section. The state of the first judging was held atastudio in Yangon city. A local subsidiary of Rohto Pharmaceutical, which supported the project, sponsors and supports the examination committee.
Asaresult of the document screening, 22 people aged between 14 to 24 participated in the first screening held at the venue in Yangon on September 26th. They performedaJapanese theme song, dance, and self-promotion that was handed downaweek ago. Some participants cosplay as costumes reminiscent of Japanese high school uniforms and characters from the popular anime “Kimetsu no Yaiba”.
In addition to showing off special skills such as ukulele playing, ventriloquism, and karate, there were also conspicuous human resources fluent in English, Japanese, and Korean.
All the girls who attended the judging have in common their strong admiration and enthusiasm for the entertainment world. “Even if I lose, I will continue to be judged until I pass, and I will not give up.”
“I should change the current entertainment world where only the sexiness of women is emphasized.”
“Beauty isastrength that is second to none.” One of them, Thaw Tar Win Thu (16 years old), started learning Japanese three years ago when she fell in love with Japanese animation and started to learn Japanese at the third grade of the Japanese test (N3 level).
Mr. Thaw Tar Win Thu (nicknamed Haruhana Chu)
who responded to the interview.
“I want many people to see my ability to dance and sing when I make my debut” (provided by ZERO2ONE)
I gotalevel that I can understand Japanese used in the scene to some extent). In the photo for document review, she showed offamaid café waitress cosplay. I want to beacute idol,” she said.
Thai dancer Meow Meow, who was judged, commented like “I am very impressed that the applicants are more prepared than expected. It will beadifficult project to raise idols”, but I want to do my best.
In Myanmar, where smartphones have become widespread after the transition to civilian rule in 2011, overseas entertainment information is rapidly spreading on the Internet. As the content industry, such as TV and advertising, gradually grew, Korean women’s group “BLACKPINK”, Japanese “AKB48”, and their sister groups became known and became an idol asareachable existence. The longing for was growing.
The production to train entertainers is still developing, but Korean companies have been activating the business of finding newcomers locally for several years. In 2019, an idol group consisting of Myanmar men was born fromaKorean entertainment agency, but there is no female group.
The collaborators participating in this idol excavation project have set up local bases to engage in developing young people interested in performing arts. “Many young people feel like they’ve lost everything in the future, but I think this project will give them some light andachance for the future,” said Meow Meow. Mr. Kato also emphasized, “I would like to proceed with the project so that an idol who will beabridge between Japan and Myanmar that gives dreams and hopes will be born.”
The 13 people who passed the examination will be trained by Meow Meow and Moya Fanai from the beginning of October and will be narrowed down by the end of the year. On official Facebook and YouTube,a10-minute video program will be broadcast onceaweek from mid-November to convey the state of the screening and training. By the time he makes his debut, which is scheduled for the beginning of the year, he wants to make it more known and increase the number of places where he can play an active role, such as appearing in commercials.
A state of training that started in October. A relaxed smile in the meantime = October 9, Yangon, Myanmar (photographed by NNA)